သစ္စာနီ| February 25, 2013 | Hits:12,758
| | စားသုံးရန် လုံးဝ မသင့်တော်သော အစားအစာများကို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ မလွှဲသာ မရှောင်သာ မြန်မာတို့ သွတ်သွင်းနေကြရသည်
မှဲ့နဲ့ဆက်စပ် ဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားကင်ဆာရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်လာနိုင်မလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၃)ကလေးများနဲ့ အားကစားအရက် အတုတွေ တယ်များ
mgoogyaw February 26, 2013 - 12:32 am Very good to study,this kind of article.We, People of Burma,are really pitiful,and our grade of eating,the edible food,are also very dangerous like poison. But,we do not know,because likeablind man,never scare of ghost.There is totally no ones to strictly control of these all kind of food,we eat in Burma. Poor people suffers the most,for they cannot afford and choose for the food.When will this case should be taking action ? Comparing with other countries,do you know that our Burmese people life span is shorter,than all ? What are we ? Are we,an animal ? or the dog’s life in other rich country,is safer than us ?
Reply ဗမာ February 26, 2013 - 11:52 am ပြည်သူတွေအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဆောင်းပါးတပုဒ်ဖြစ်သဖြင့် လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်။ အောက်ပါစာပိုဒ်အရ တရုတ်ပြည်အစိုးရရဲ့ မကောင်းတာတွေထဲက ကောင်းကွက်တခုလို့မြင်မိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်.. အများပြည်သူနဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်း(အထူးသဖြင့်အစားအသောက်) ထုတ်လုပ်သူစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ မတော်လောဘကို တော်ရုံတန်ရုံ ပြစ်ဒဏ်လေးချမယ်ဆိုရင် စားသုံးသူပြည်သူတွေမှာ ဘ၀နဲ့ရင်းပြီးပေးဆပ်ရကာ ထိုသူများမှာတော့အပြုံးတောင်ပျက်မယ်မထင်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်သေဒဏ်လိုပြစ်ဒဏ်ကသာ ထိုသူတို့ရဲ့ မတော်လောဘကို ထိမ်းကျောင်းပေးနိုင်ပါကြောင်း။ ဧရာဝတီကိုလည်း ဒီလိုမျိုးစာတွေများများတင်ပေးနိုင်ပါစေကြောင်း ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဆန္ဒပြုပါတယ်။
“”ဖမ်းဆီးရမိသူများကို အမျိုးသား အစားအသောက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၈ (က)အရ အရေးယူသည်။ ထို ဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် ၃ သောင်း ချမှတ်နိုင်၏။ ဒီ ပြစ်ဒဏ်လောက်ကို ၀ိသမသား လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဖြုံမယ် မထင်။ ပြင်းထန် ထိရောက်သော အပြစ်ဒဏ် စီရင်ပေးဖို့ လိုသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် အားလုံးအသိပင်၊ ဒီလို ကိစ္စမျိုး ဖြစ်လာလျှင် သေဒဏ် ပေးလေ့ရှိသည်။ (နို့မှုန့်ထဲတွင် မယ်လမင်း ဓာတ်ပါဝင်မှု ကိစ္စ ကြည့်ပါ။)”"
Reply Hla Maung March 1, 2013 - 2:44 am All Myanmar people should buy all foods with FDA approved certificate from Super market. All Super market should sell FDA approved foods in Myanmar
Reply မင်းခေါင် March 1, 2013 - 10:53 am ဒီဆောင်းပါးအတွက်အထူးကျေးဇူးပါဆရာ
Reply Myanmar Pyithar March 4, 2013 - 8:49 pm ထို အဖွဲ့က ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ဈေးကွက်ထဲ၌ ရောင်းချနေသော ငရုတ်သီးမှုန့် နမူနာ ၅၄၃ ကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၁၇၅ ခုတွင် စားသုံးသူကို ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်၊ မျိုးရိုးဗီဇ ထိခိုက်စေနိုင်သော ဓာတုဆိုးဆေး (Auramnine – O နှင့် Rhodamine B) များ ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရသည်။ ထိုအထဲမှ အမှတ်တံဆိပ် ၂၀ ကို အရေးယူခဲ့သည်။ ဒါဆို တခြား ၁၅၅ မျိုးကို အရေးမယူတော့တဲ့ သဘော ဖြစ်နေသည်။ (တမျိုးမှာ အမည်မပါ၊ အမည်ပါသော်လည်း လိပ်စာမပါ။) ဘာကြောင့်ပါလဲ။